Tenga Pregabalin poda (148553-50-8) Vagadziri & Fekitori
Pregabalin powder (148553-50-8) inonyanya kushandiswa mukurapa Kukunda; Neuropathic pain; Kuzvidya mwoyo nekusazvidya mwoyo. Icho chiri chekirasi remishonga inonzi antiticonvulsants.
Pregabalin poda Vhidhiyo
Kemikari Name (S) -3- (Aminomethyl) -5-methylhexanoic acid
Brand Name Lyrica, vamwe
Kirasi yeMishonga Anticonvulsants, Other; Analgesics, Zvimwe; Fibromyalgia Agents
Molecular Wsere 159.229
Monoisotopic Mass 159.1259 g / mol
Kunyorera Point 186-188ºC
Boiling Point 274.0 ± 23.0 ° C pa 760 mmHg
Biological Half-Life 6.3-11.5 maawa
Storage Temperature 0 - 4 C kwenguva pfupi (mazuva kusvika mavhiki), kana -20 C kwenguva refu (mwedzi).
APane Pregabalin imishonga inoshandiswa kugadzirisa hosha, kuora kweuropathi, fibromyalgia, uye huwandu hwehutano hwepfungwa.
Pregabalin powder tsananguro
1.Chii chinonzi Pregabalin poda?
Pregabalin piritsi mushonga unonyanya kutengeswa pasi pezita rechiratidzo Lyrica mumatunhu akasiyana siyana munyika. Mushonga unorwisa-epileptic uyo unonziwo anticonvulsant. Mushonga uyu unoshandiswa kudzikisa pfungwa dzehuropi zvinotungamira mukubatwa. Kune rimwe divi, Pregabalin anokanganisa makemikari ehuropi ayo anotumira masaini ekurwadziwa mukati mehurongwa hwemuviri wemuviri. Mushonga uyu unoshandiswawo mune yezvekurapa kuti ubate marroni akasiyana anokonzerwa nezvirwere zvakasiyana siyana senge nerve pain inokonzerwa ne fibromyalgia, chirwere cheshuga, uye nyangwe kurwadziwa kwemuzongoza.
2.Nzira yekutora Pregabalin powder?
Pregabalin (148553-50-8) iripo macapura, yakatambanudzwa-kubudiswa, kana refu-inobata mapiritsi uye zvakare mumuromo mhinduro (mvura). Mafomu ese ePregabalin anoshanda nenzira imwechete, uye chiremba wako achave munhu akanakisisa kusarudza iyo yakakodzera iwe zvichienderana nechimiro chako kana zvaunoda kuzadzisa panopera kutenderera kwemupimo. Kuve mushonga wemuromo unoshanda semishonga yekurapa yakanakisa kune vazhinji varwere vasingafambidzane majekiseni. Mushonga uyu zvakare unogona kutungamira kumamwe mhedzisiro yakaipa kana yakanyanyisa kana kushandiswa zvisirizvo. Ita shuwa kuti iwe unogara uchitevera iyo yekuraira yekuyera kuti uwane mibairo iri nani.
Pregabalin inogona kushandiswa pamwe chete nemamwe mishonga kubatsira kurapwa kwekutanga kubata muvana vane makore anopfuura mana uye vakuru zvakare. Kwemakore mazhinji ikozvino, mushonga wave uchitamba chinzvimbo chakakosha munyika yekurapa, ichiita kuti ive imwe yezvinonyanya kurapa-inoderedza marawa pamusika. Mushonga uyu unofanirwa kungotorwa pasi pekunyorerwa nachiremba kuti uwane mibairo iri nani. Nekudaro, gara uine chokwadi chekuti unowana iyo Pregabalin kubva kumutengesi akatendeka kana mugadziri akakukomberedza.
3.Pregabalin powder Sale
Nyika iri kuchinja, uye nhasi, unogona kutenga Pregabalin poda online pamhepo pachikuva chedu pamutengo unodhura. Webhusaiti yedu inosevenzesa-ishamwari, zvichiita kuti zvive nyore kwauri kuti ufambe kubva kune chimwe chigadzirwa ichienda kune chimwezve zvakare kuita yako yekurongeka mukati memasekondi. Iwe unogona kuwana webhusaiti yedu kuburikidza neyako smartphone, piritsi, kana kunyange laptop yako. Pamusoro peizvozvo, tinoita kuburitsa pasi rese uye mukati menguva pfupi pfupi inogoneka. Unogona kutenga Pregabalin muhuwandu kana kunyangwe zvakaringana kutenderedzwa rako reyero.
4.Where Kutenga Pregabalin Powder?
Isu tiri vanotungamira Pregabalin mutengesi mudunhu, uye edu anodhura mitengo haakanganise kunaka kwezvinhu zvedu zvigadzirwa. Isu tinopa akasiyana siyana emhando dzezvigadzirwa zvekurapa mudura redu repamhepo. Nekudaro, isu tinogara tichiraira vatengi vedu vese kuti vaone kuti vanoongororwa nekurapwa vasati vatanga kutora zvigadzirwa zvedu. Zvigadzirwa zvedu zvekurapa zvinogona kutungamira nemhedzisiro painoshandiswa zvisirizvo kana kuwandisa. Pregabalin yekutengesa inowanikawo pane yako yepamhepo mishonga asi ita shuwa kuti unoiwana kubva kumutengesi akavimbika. Haasi ese online epamhepo kana epamhepo mashopu ekuchipatara anopa emhando zvigadzirwa.